3 In 1 Integrated Screw Air Compressor Compact Unit Miaraka amin'ny Screw Air Compressor, Air Dryer Ary Air Tank
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny compresseur amin'ny rivotra, ny fanamainana rivotra, ny sivana marina, ny kabine ary ny tanky, ny compresseur rivotra mifangaro dia toa mifatotra, tsara ary zatra. Amin'ny alàlan'ny fiasan'ny fanamainana rivotra sy sivana amin'ny rivotra, ny rivotra ivoahana dia maina sy madio izay afaka manampy ny fitaovan'ny rivotra / tsipika famokarana mihodina tsara sy azo antoka. Ity maodely ity dia afaka manolotra fahombiazana avo, toerana fananganana kely ary fanombohana miasa haingana.
Fantsom-panafody mihodina lozisialy solika avy amin'ny solika miaraka amin'ny IP54 Motor German Air End
Ny compresseur rivotra mihodina rotary dia malaza any amin'ny ozinina, zavamaniry, na toerana fanamboarana rehetra noho ny tsingerin'ny fandehany. Raha toa ny karazana compresseur an'habakabaka hafa dia tsy afaka miasa afa-tsy amin'ny tsingerin'ny / ivelan'ny tsingerina, mihodina tsy mijanona manodidina ny famantaranandro ny visy rotary. Amin'ny tsingerin'ny adidy 100% dia tsy tokony hakatona ny compresseur rivotra mihodina ary manomboka miverina miverimberina. Raha mbola refesina tsara ny compresseur an'ny rotary rotary dia ambony noho ny ankamaroan'ny compresseur rivotra hafa ny fahombiazany. Ny maodely tsara indrindra amin'ny compressor visy rotary dia manampy ireo orinasa hampitombo ny fahombiazany manerana ny rojom-pamokarana.
2naona hatramin'ny 8inch azo alentika ao anaty rano ao anaty lavadrano
Ny paompy lalina dia ny motera sy ny paompy. Izy io dia karazana paompin-drano izay alentika ao anaty fantsakana anaty rano ambanin'ny tany hamoahana sy hitaterana rano. Ampiasaina betsaka amin'ny fambolena sy fantsakan'ny tany fambolena, orinasa indostrialy sy fitrandrahana harena ankibon'ny tany, famatsian-drano sy fantsakan-drano an-tanàn-dehibe ary fikarakarana ny loto izany dia misy: kabinetra fanaraha-maso, tariby misitrika, fantson-drano, paompy rendrika ary motera rendrika.
1.0 M3 / min ~ 12 M3 / min Fanamainana rivotra amin'ny refrigerant miaraka amin'ny Refrigerant R410A ho an'ny rafitra Air Compressor
Ny fanamainana rivotra vita amin'ny rivotra dia iray amin'ireo fitaovana fanamainana rivotra voadidy be mpampiasa. Ny fanamainantsika dia manafoana ny hamandoana sisa tavela mba hahatratrarana rivotra maina tanteraka ho an'ireo rindranasa izay mila kalitaon'ny rivotra mandroso. Izy io dia natao nifototra tamin'ny teknolojia famokarana mandroso ary miasa mahomby izy ireo ary miaro ny rafitrao sy ny fizotranao amin'ny fomba azo antoka, mahomby amin'ny angovo ary mahomby amin'ny fandaniana.
Fahombiazana avo lenta maharitra Magnet tsy miova Frequency Screw Air Compressor miaraka amin'ny tabataba ambany
Ny compresseur rivotra miovaova maharitra maharitra miovaova dia ekena ho compresseur rivotra mahomby indrindra eto an-tany. Napetraka ny motera maharitra manerantany ary mahatonga ny compressor hitsitsy angovo 5% -12% bebe kokoa noho ny maotera tsy mahazatra mahazatra dingana telo. Ny motera dia afaka mitazona fahombiazana avo lenta na dia eo ambanin'ny hafainganam-pandeha ambany aza, mba hahafahan'ny compressors mamonjy angovo 32,7% amin'ny salanisa.
Famonosanan-tsolika famoahana angovo roa-angovo famonjen-kery miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambany
Ny fampiharana ny lalao lavorary an'ny Rare-earth motera magnetika maharitra, fampidirana ary fampitana fitambarana, ny faran'ny dingana roa dia azo entina amin'ny fahombiazana avo indrindra. Ny fiainana miasa amin'ny sehatra roa dia lava kokoa noho ny maodely mahazatra noho ny RPM ambany, ankoatry ny fitsinjaram-pahefana dia miharihary mihoatra ny 20%. Miaraka amin'ny rotors roa misy habe samihafa, ny fizarana tsindry mety dia azo atao mba hampihenana ny tahan'ny famatrarana isaky ny famatrarana. Ny tahan'ny famatrarana ambany dia mampihena ny fivoahan'ny atiny, mampitombo ny fahombiazan'ny volumetric ary mampihena be ny enta-mavesatra, manitatra ny androm-piainan'ny milina lehibe.